Best siladda iPhone File u iPhoen 5 / iPhone 4s / iPhone 4 / iPhone 3GS
> Resource > iPhone siladda> Best iPhone File in View iPhone Files
"Ma waxaa jira qalab wax, dhihi siladda file iPhone in ii ogolaanayaa u aragto iyo maarayn files iPhone aan? Waa madax si loo eego ka dhex daraasiin files on iPhone hees doonayo ama video. Walba oo soo jeedinaya?"
iPhone waa qalab la yaab leh loogu dhagaysiga muusigga ah, daawashada filimaanta, iyo qaadashada sawirada. Si kastaba ha ahaatee, ay shaashadda yar oo ka dhigaysa in ay wax yar oo dhib badan si aad u eegto files, gaar ahaan marka aad u baahan tahay in la raadiyo gaar ah song, video, ama sawir. Xaaladdan oo kale, waxaa aad u baahan yahay si loo qabto siladda file iPhone ah si ay kaaga caawiyaan in aad u aragtid iyo maarayn files iPhone. Halkan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku talinaynaa dadka isticmaala iPhone xirfadle siladda file iPhone - TunesGo Wondershare. Waa app aad u faa'iido. Marka aad isku daydo, aad u jecel doonaa.
Download iPhone file siladda - TunesGo in ay leeyihiin isku day!
Fiiro gaar ah: Labada Wondershare TunesGo (Windows) iyo Wondershare TunesGo (Mac) versions maxkamad ayaa la heli karaa si ay halkan kala soo bixi. Dooro mid ka mid sax ah si aad u computer. Haddaba versions Windows waxay leedahay waxyaalo badan qoraalkii Mac. Eeg faahfaahinta hoos ku qoran.
Sida siladda file iPhone ah, Wondershare TunesGo falaa Lugood kuu sameyn karo - music maaraynta, videos, iyo Photos, oo sameeya wixii Lugood karin, waayo, waxaad u - wareejinta music, videos, iyo sawiro ka iPhone in computer.
Marka hore, aynu eegno waxa file iPhone siladda kuu sameyn karo halka Lugood ma sheegi karo.
A hal click in aad nuqulka heesaha oo dhan ka iPhone in Lugood Library aan nuqul kasta;
Bedelka songs soo xulay iPhone in Lugood Library iyo computer;
Bedelka wax ku dhowaad video aad iPhone;
Photos Bedelka ka iPhone Photo Library iyo Roll Camera in computer;
Nuqul iPhone music playlist in Lugood Library iyo PC (oo keliya ayaa laga heli karaa TunesGo Windows version);
Dib ugu SMS iyo xiriirada ka iPhone in computer (oo keliya ayaa laga heli karaa version TunesGo Windows);
Dhoofinta iPhone xiriirada si file vCard, Outlook, buug Cinwaanka Windows, iyo Windows Live Mail (oo keliya ayaa laga heli karaa version TunesGo Windows);
Saar songs, videos, sawiro, playlist on iPhone;
Labaad, siladda file this u iPhone sidoo kale sameeya karaa waxa Lugood kartaan.
Music nidaameed, videos, iyo sawiro ka computer si iPhone;
Xiriirada nidaameed Muuqaalka iyo Windows ka computer si iPhone;
Sidee siladda file iPhone shaqeeyaan?
Ka dib marka aad abuurtaan TunesGo on your computer iyo xiriiriyaan iPhone la your computer via cable USB ah, taas siladda file iPhone muujin doonaa oo dhan iPhone files warbaahinta uu furmo suuqa hoose. By gujinaya ah isha u dhiganta, waxaad samayn doonaa waxa aad rabto.
Daawo Video inaad aragto waxa siladda iPhone File ka qaban kartaa sidii aad u
Isku day iPhone siladda file - Wondershare TunesGo hadda!
Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Computer si ay iPhone
Crisis ee Bendgate u iPhone 6
Casharrada Sidee inay dayactir ah dillaac iPhone 5 / 5s / 5c Screen
Sidee si ay u gudbiyaan Podcasts ka iPhone ah in Computer ah